Sida loo abuuro tuuryo 'Auto Auto' Androidsis
Android Auto waa codsi aad u shaqeynaya si loogu isticmaalo barokicis kasta gaadhigayaga, ama si aad u hesho cinwaan sax ah ama aad ugu isticmaasho alaab badan. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa rakibidda codsiyo badan oo ka dhex jira Play Store, marka laga reebo waxaa jira xeelado dhowr ah si aad uga hesho wax ku filan aaladda la yaqaan.
Nooca ugu dambeeya ee 'Android Auto' wuxuu horeyba kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh u abuurto tuuryo, sidaasna amar ku bilaabaya Kaaliyaha Google. Adeegani wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku soo wici karto, GPS-ka toos u bilaabi karo ama farriin ugu diro codsiyada sida Telegram ama WhatsApp.
Tan awgeed, waa lagama maarmaan in la helo cusbooneysiinta Febraayo 12, haddii aadan wali sameyn waxaad ka hubin kartaa gudaha dukaanka Google. Gaabinta degdegga ah waa muuqaal cusub taas oo aad uga faa iideysan karto Android Auto mar aad diirada saarto wadada.
Waxyaabaha lagama maarmaanka ahi waa in laga helo codsiga Play Store oo la soo dejiyo oo la rakibo, sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa Dukaanka Aurora, beddelka Google Play. Ku shaqee qalabka Huawei iyo Honor haddii aad leedahay adeegyo Google ah, ama leh GSpace, Dual Space, iyo waxyaabo kale oo lagu beddelan karo.
In la abuuro tuuryo dhaqso badan oo ku jirta Android Auto waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka 'Auto Auto' qalabkaaga gacanta
Tag "Customize apps menu" oo guji "Kudar kudarida liiska menu"
Hadda, ku dar dar gelinta liiska barnaamijyada, dhagsii "tallaabada Wizard"
Kaaliyaha Waxqabadka waa inaad ku habeysaa amarradaas aad rabto inaad u adeegsato Kaaliyaha Google, waad isku habeyn kartaa dhammaan kuwa aad rabto, ugu dambeyn dooro astaanta uu amarku ka muuqan doono shaashadda
Waxaad ku tijaabin kartaa tuubada badhanka «amarka Imtixaanka» si aad u aragto sida ay u dhaqanto, haddii horeyba loogu waafajiyay baahiyahaaga waxaad ku keydin kartaa «Abuur toobiye»
Gawaaridaani ku jira Android Auto waxay ku habboon yihiin wicitaan deg deg ah qof ahaan, waxaad u abuuri kartaa marinno badan intaad rabto oo wax walba gacanta kuugu jiraan. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad awood u yeelato inaad muusiga garaacdo mar haddii aad taleefanka ku xirato gaariga, qofka aad wacdo ama aad hawl kale qabato adigoon marin arjigaas.
Android Auto oo leh toobiyeyaal dhaqso badan Waxay u oggolaan doontaa hal saxaafad si ay u qabato hawl, tusaale ahaan waxaad furi kartaa liistada YouTube-ka, Spotify oo leh heesaha ugu fiican, qof u yeer, boqolaal waxyaalood oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo abuuro dariiqooyinka loo yaqaan 'Auto Auto'
Samsung ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiinta One UI 3.1 ee Galaxy S20, Galaxy Note 20 iyo 15 moodello kale